Mirror, Arts na Crafts Factory Supplier-SHUNDA - Osisi PVC Welcome Seahorse Animal Beach Door Sign, Home Festival Decoration Sign Welcome Sign OEM and Factory | SHUNDA
Osisi PVC anabatara Seahorse Animal Beach Sign, Akara ngosi ihe ndozi ụlọ nke ụlọ
*Nabata ahaziri akara mgbidi ọ bụla*
MOQ bụ 1iece, nabata ahaziri nke ọ bụla nka na nka
Zuru oke maka ọtụtụ nka, nka na ọrụ ntụrụndụ. Mepụta nke zuru oke
Osisi PVC Nnabata Anụmanụ Beach Sign, Akara Ime Ememme Ụlọ Akara ngosi nnabata
SHUNDA Crafts na-arụpụta, mbupụ, ma na-eweta ụdị nka na nka nka niile. Anyị na-enye ngwaahịa na ọrụ dị iche iche ahaziri ahazi, sitere na mmepe ngwaahịa ruo n'ịkwalite mmemme mmemme. Anyị ọkachamara na Igwefoto (Ego ugogbe anya, enyo ọnwa, mirror ọkara ọnwa, enyo okirikiri, mirror nwere shelf, mirror etiti igwe, enyo azụ osisi, wdg). Nkà na nka (Ogwe osisi, shelf metal, shelf na mirror, eriri eriri, ihe resin, nka resin, igbe osisi, igbe mmanya, igbe anụ wdg), oriọna naanị tebụl na ihe ịchọ mma seramiiki ma ọ bụ onyinye maka ekeresimesi, Halloween, Ista na Valentine na ndị ọzọ. . Na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na mgbalị, anyị na-mere n'ime a home mma ulo oru ọkọnọ yinye, na ahịa n'usoro ulo oru yinye, gụnyere mirror, shelf, oriọna na yiri ngwaahịa. Na anyị nwere usoro njikwa mma zuru oke iji chịkwaa usoro ọ bụla site na ihe, ihe nlele, mmepụta, mbupu na mbupu iji hụ na ngwaahịa ọ bụla zuru oke.
1) Kedu ngwaahịa ị na-emepụta?
- Anyị na-ahụ maka nka na nka ọkachamara OEM / ODM dị iche iche, dị ka shelf osisi, shelf metal, nkata mkpụrụ, eriri igwe, enyo ọnwa, enyo nwere shelf, shelf nwere enyo, igbe osisi, nka resin, wdg.
2) Anyị nwere ike iji logo na imewe nke anyị?
- N'ezie, anyị na-anabata OEM/ODM. Biko zitere anyị logo na nkọwa ịchọrọ, anyị nwere ike hazie gị ngwaahịa.
3) Ị na-enyocha ngwaahịa ndị emechara?
- Ee, a ga-eme nyocha ahụ maka usoro mmepụta nke ọ bụla site na otu QC.
4) Kedu maka mbupu?
- Site n'oké osimiri, ikuku, awara awara (DHL, UPS, FEDEX, TNT), wdg.
5) Kedu ụdị nhọrọ ịkwụ ụgwọ ị na-enye?
- TT, Western Union, PayPal, ego nkịtị, Escrow, MoneyGram, kaadị kredit, wdg
Atụmatụ dị ịrịba ama:
Shemy Shi (onye isi ahia)
Aha ụlọ ọrụ: Shunda Crafts Co., Ltd
Nke gara aga: Osisi PVC Nnabata Animal Beach Sign, Home Ememme Decoration Sign Welcome Sign
Osote: Osisi PVC Nnabata Duck Animal Beach Sign, Signal Decoration Decoration Sign
akara ụzọ osisi
ọhụrụ imewe ubube ịrị obere koala potted d...
Waya dị elu nke nwere mkpuchi metal mpịachi maka...
ụdị ejiji arịa ụlọ gburugburu udi kọfị tray...
30ml,60ml,120ml,350ml Glass Plastic Perfume Sku ...
High Quality 3 tie oyi akwa waya na mkpuchi Meta...
Mgbidi gbanyere ọnwa abụọ Shelf Osisi na-ese n'elu mmiri ...